Nin Oday ah oo jira 70-Sano oo Muuqaalka Jirkiisa isku badalay Wiil 20-Sano jir oo kale (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Dr. Jeffrey Waa Nin Oday ah oo Jira 70-Sano hasa haaatee hada jirkiisa uu umuuqdo Wiil yar oo 20-Sano jir oo kale ah kadib markii uu sameeyay Aalmiito iyo Jiim fara badan.
Ninkaan ayaa marka aad wajikiisa aragto waxaad mooda qof dhalinyaro ah oo wajiga xanuun ka saameeyay laakin saas ma ahan waa dhan dhalinta uu jiro Ninkan Odayga ah.
Odaygaan ayaa bilaabay jirdhiska 10 sano ka hor markaas u da’diisa ahayd ilaa 60 sano halka hada sii caga cagaynayso 70 jir ,walina kama daalin sameynta jir dhiska iyo aalmiitada oo wali si joogta ah uu u sameeyo.
Dr. Jeffrey ayaa hada u muuqda mid ku laabtay dhalinyaranimadiisa marka loo eego qaab dhismeedka jirkiisa iyo ad adeega ka muuqda aad moodo 20-jir is heesta oo kale.
Dr jeffry oo ah Nin Footo yaqaan ayaa 9ki sano u danbeeyay qaadanay daawooyin kobciya ama dhisa hormuunada biniadamka isagoo sidoo kale isticmaalayay qudaar kala gedisan mar walba uu jir dhiska uu u socdo.